ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် တရုတ်ရေ Wifi Switch ဒစ်ဂျစ်တယ်အပူချိန် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
Water Wifi Switch Digital Temperature Controller သည် Gas Boiler၊ Water Valve၊ Electric Actuator၊ Radiator Valve၊ Thermostatic Radiator တို့ကို အဖွင့်/အပိတ် ထိန်းချုပ်ရန် တီထွင်ထားပါသည်။ သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၏ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိစေရန်။
Discount Water Wifi Switch Digital Temperature Controller ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ
အိမ်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားမှာနေနေပါစေ အခန်းအပူချိန်ကို အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အချိန်ဇယားကို အခြေခံ၍ Water Wifi Switch Digital Temperature Controller ကို အစီအစဉ်ဆွဲပြီး သင့်ရေဘေလ်များကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆေးရုံ၊ ဟိုတယ်၊ မြို့ပြအဆောက်အဦနှင့် အိမ်ကြီးများတွင် အပူထိန်းချုပ်ရန်အတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
Water Wifi Switch Digital Temperature Controller အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
ဗို့အား 1.90V-230V ကျယ်သည်။
2.Voice control၊ Amazon Alexa နှင့် Google Home အတွက် သင့်လျော်သည်။
3.WiFi ကွန်ရက်၊ သင်၏ iOS နှင့် Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ပါ။
4. ကြီးမားသော LCD အနုတ်မျက်နှာပြင် နောက်ခံအလင်းပြကွက်၊ အေးမြပြီး ခေတ်မီသော ဒီဇိုင်း။
5. Timer ON/OFF လုပ်ဆောင်ချက်။
6. ရွေးချယ်နိုင်သောမုဒ်နှစ်ခု- လက်စွဲမုဒ်နှင့် အလိုအလျောက်မုဒ်။
ရွေးချယ်မှုများအတွက် 7.Internal နှင့်ပြင်ပအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ။
8.6 ကာလ ပရိုဂရမ်မာနိုင်သော ထိန်းချုပ်နိုင်သော အပူချိန် ဆက်တင်။
10. ဓာတ်အားချို့ယွင်းသောအခါတွင် မမ်မိုရီလုပ်ဆောင်ချက်၊ သင့်ဆက်တင်အား ပါဝါချို့ယွင်းမှုမှ ကာကွယ်ပါ။
11.Frame ခံနိုင်ရည်ပစ္စည်း, လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော။
12. အခန်းတွင်း အပူချိန်ပြသမှု တိကျမှုမှာ ±0.5â”ƒ ဖြစ်သည်။
13. အခန်းတွင်း အပူချိန် အလိုအလျောက် ချိန်ညှိခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်။
hot Tags:: Water Wifi Switch ဒစ်ဂျစ်တယ်အပူချိန် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ရောင်းချသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်